Waxsansheeg News - Genzon Novel Materials, oo ka qeybgaleysa “2019 Suqian Wershadaha Cagaaran Suug”
Qalabka Genzon Novel, oo ka qeyb galaya "2019 Suqian Wershadaha Cagaaran Soosaarka"
28dii Sebtembar, munaasabaddii deegaanka ee Suqian Green Industry Expo ayaa lagu qabtay furitaankii weynaa ee Bandhigga Suqian. Mawduuca Bandhigga Cagaaran waa “cagaar, is-dhexgal iyo boodbood”, Diiradda saareysa warshadaha cagaaran iyo dhaqaalaha dabiiciga si loo fuliyo wada-xaajoodka dhaqaalaha iyo ganacsiga, kor u qaadista is-dhexgalka ee hal-abuurka sayniska iyo tikniyoolajiyada iyo horumarinta warshadaha, iyo in la sii uruuriyo hal-abuur cusub oo cagaaran. horumarka boodboodka
Genzon Novel Materials, oo ah shirkad caan ah oo maxalli ah, ayaa alaabteeda tikniyoolajiyadeed sare u keentay bandhigga. Qalabka Genzon Novel sidoo kale waxay soo bandhigeen taxanehooda wax soo saarka ugu weyn: Filimka saldhigga xirxiran, filimka difaaca ee Kaarka, Filinka saldhiga ah ee la sii daayo, Filimada saldhigga ilaalinta, filimka 'base base', iyo filimka 'base base thread', filimka Tangle. Xaruntu waxay soo jiidatay khubarada warshadaha iyo dadka xiiseynaya.
Isgaarsiinta Wershadaha cagaaran ee Suqian ee 2019 waa munaasabada ugu weyn uguna saamaynta badan Suqian, kaliya maahan madal muhiim u ah xoojinta dhaqaalaha, is-weydaarsiga ganacsiga iyo iskaashiga warshadaha, laakiin sidoo kale waa madal ugu habboon ee lagu faafiyo sumadda. Qalabka Genzon Novel ee ka qeyb galaya munaasabada, kaliya ma hagaajinayso sumcadda dibadda, laakiin waxay sidoo kale kordhineysaa saameynta astaanta.